नीति तथा कार्यक्रममा : नयाँ योजना र कार्यक्रम के-के आयो ? – eRoyaltimes
सरकारी जग्गाको खोजतलास
केन्द्रीय पशु चिकित्सालय वैज्ञानिक ढंगले अगाडि बढाउने अभियान जुटेको छ । -डा. मण्डल
राप्रपा ललितपुरद्वारा समानुपातिक उम्मेदवार शिफारिस
नेपालले नै फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्ने औपचारिक घोषणा
नेपालका लागि नयाँ अमेरिकी राजदूत
नीति तथा कार्यक्रममा : नयाँ योजना र कार्यक्रम के-के आयो ?
सरकारले आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।
संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वर्तमान सरकारको अबको कार्यदिशा सुदृढ स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थान हुने बताइन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा देशको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील र सुदृढ तुल्याइने उल्लेख छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेकाले त्यसको पुनरुत्थानका लागि सरकारले विविध कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने उनले बताइन् ।
कोरोना महामारीसँग लड्नुपरेको अहिलेको विषम परिस्थितिमा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको उत्थानका लागि कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकास तथा उत्पादकत्व वृद्धि, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न गरिने तथा अन्य आयोजनको पुनः प्राथमिकीकरण गरेर अघि बढ्ने नीति अवलम्बन गरिने उनले बताइन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा के के छ ? नीति तथा कार्यक्रमका मुख्य घोषणाः
– कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको हो । ती स्थान समेटेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरिने ।
– ३०० पुल बनाइने ।
– तीन वर्षभित्र सुकुम्वासी समस्या र अव्यवस्थित बसोबास अन्त्य गरिने ।
– आगामी आर्थिक वर्षमा दुई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल संचालनमा ल्याइने ।
– वैदेशिक व्यापारमा चीनका ७ बन्दरगाह प्रयोग गरिने ।
– दीगो पर्यटन उत्थानको कार्यक्रम ल्याइने ।
– काभ्रेको उपयुक्त स्थानमा आन्तरिक विमानस्थल बनाउने ।
–आगामी तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको घरमा खानेपानी पुर्याइने ।
– भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन, निजगढ र काभ्रेमा विमानस्थल निर्माण सुरु गरिने ।
– कृषिमा अनुदान रकममा नभइ उत्पादन सामग्रीमा दिइने ।
– तेह्रथुमको चुहानडाँडामा विमानस्थल बनाउने ।
– नेपाल–भारत पारवहन तथा वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गरिने ।
– नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्गको एक किलोमिटर खण्ड यसै वर्ष बन्ने ।
–तीन वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गरिने ।
– प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी कम्पनी दर्ता तथा नविकरण छिटो छरितो बनाइने ।
–वीरगञ्ज–काठमाडौं र रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको निर्माण थालिने ।
– मनमोहन र गंगालाल अस्पताललाई बाल मुटुरोगको पहिचान, परीक्षण र उपचार गर्ने संस्थागत व्यवस्था गरिने ।
– ठूला आयोजनामा मात्रै विदेशी लगानी भित्र्याइने, विदेशबाट फर्केका र अर्धबेरोजारलाई कृषिमा जोडिने ।
– सरकारी स्वामित्वका बन्द उद्योग फेरि सञ्चालन गरिने ।
– मालपोतको काम अनलाइन प्रणालीबाट गरिने ।
– ‘स्वच्छ नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिने ।
– सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा अतिक्रमण हटाउन अभियान चलाइने ।
–स्वदेशमै फलाम उत्पादन शुरू गरिने ।
– गरीब तथा विपन्नलाई निःशुल्क उपचार ।
– एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्थाका लागि ९ अर्ब विनियोजन गरिने ।
– भूमि बैंक स्थापना गरिने ।
– सबै स्थानीय तहमार्फत युवाहरुलाई घुम्ती तालिम गरिने ।
– विमानस्थल र सीमा नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरिने ।
– राजमार्गमा एक घण्टाको दूरीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने ।
– ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ नारा कायमै ।
– जमिन बाँझो राख्न नपाइने ।
– स्वदेशी वस्तु उपयोगको लागि अभियान चलाइने ।
– खेतका आलीमा समेत बिरुवा लगाउन अभिप्रेरित गरिने ।
– सहकारी संस्था गाभ्न प्रोत्साहन गरिने ।
– प्रमुख कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने
– आन्तरिक राजश्वलाई आम्दानीको मूख्य श्रोत बनाइने ।
– स्वास्थ्य सेवा विभाग खारेज हुने, महामारी नियन्त्रणका लागि खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण (एफडिए) स्थापना गरिने स्थापना गरिने ।
– वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई सुरुआती पुँजी उपलब्ध गराउने ।
– स्नातकोत्तर पढेका युवालाई शैक्षिक विकासमा परिचालन गरिने ।
– देशलाई कोरोनामुक्त बनाउनु पहिलो प्राथमिकता ।
– केन्द्रमा ३ सय शैय्या र प्रत्येक प्रदेशमा ५० शैय्याको सरुवा रोग अस्पताल बनाइने ।
– देशभरबाट ३ अंकमा फोन गरेर एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सुचारु गरिने ।
– आगामी आर्थिक वर्षमा ‘साक्षर घोषणा गरिने’ बताइएको छ ।
– संघमा ३०० शैय्याको अत्याधुनिक अस्पताल निर्माण गरिने ।
– फजुल खर्च रोक्ने, आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण गर्ने ।
– १० वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर पार्ने घोषणा ।
– आगामी वर्षभित्र सबैको स्वास्थय बिमा गरिने ।
– वडामै मधुमेह र रक्तचापको परीक्षण गरिने ।
– ४० वर्षमाथिका नागरिकको ६ महिनाको एक पटक अल्बुमिन तथा ग्लुकोज निःशुल्क जाँच हुने ।
कहिल्यै यस्तो भएको छ कि, तपाईं कुनै ठाउँ वा व्यक्तिको नाम स्मरण गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ, तर जति गरेपनि त्यो याद हुँदैन । भनिन्छ, उमेर बढ्दै जाँदा हाम्रो स्मरणशक्ति पनि कमजोर हुन्छ । यस्तो हुनपनि सक्छ । तर, स्मरणशक्तिलाई हामी उमेर ढल्कदै गएपनि तन्दुरुस्त राख्न सकिन्छ । त्यसका लागि केही काइदा […]
आर्थिक वर्षको बजेटका लागि कृषि क्षेत्रका आठ ठूला कार्यक्रम तर्जुमा
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको विवाद जारी, दोहोरो करको मारमा सर्वसाधारण